မေးး​ဘို​ဘို : mp3, mp4 ​တွေ​မှာ ​ဖွင့်​လိုက်​တဲ့​အ​ခါ starting ​ပဲ​ပေါ်​လာ​ပြီး ​ဘာ​မှ ​အ​လုပ်​ပဲ . ​တန့်​နေ​တဲ့​အ​ခါ ​ဘယ်​လို​မျိုး​များ​ပြန်​ပြင်​ရ​သ​လဲ​ဆို​တာ ​အစ်​ကို​များ​သိ​ရင်. ​ကျေး​ဇူး​ပြု​ပြီး ​ပြော​ပြ​ပေး​ပါ​လား​ခင်​ဗျာ။
​ဖြေ : ​ညီ​လေး​ရေ ​အဲ့​လို​ဖြစ်​တာ​က mp3 (or) mp4 player ​ထဲ​မှာ ​သီ​ချင်း​တွေ​ကို ​အ​ပြည့်​ထည့်​ထား​လို့​လဲ ​ဖြစ်​တတ်​ပါ​တယ်. ​စက်​ထဲ​မှာ ​သီ​ချင်း​တွေ ​ပြည့်​နေ​ရင် loading time ​ကြာ​တတ်​ပါ​တယ် . ​ဖုန်း​လဲ ​အဲ့​လို​ပါ​ပဲ . ​ကို​ဝယ်​ထား​တဲ့ memory card ​ထဲ​မှာ ​ဘယ်​တော့​မှ ​အ​ပြည့် ​မ​ထည့်​ပါ​နဲ့ . player ​နိုင်​သ​လောက်​ပဲ ​ချင့်​ချိန်​ပြီး​တော့ ​ထည့်​တာ ​အ​ဆင်​ပြေ​မှာ​ပါ . ​တစ်​ချို့ player ​တွေ​က 1 GB ​ပဲ ​နိုင်​တယ် . ​ဒါ​ကို ​ကို​က2GB card ​ပြောင်း​ပြီး ​သုံး​မယ်​ဆို​ရင်​တော့ loading time ​က ​ကြာ​မှာ​ပါ​ပဲ . ​အ​ဆင်​ပြေ​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ် .
​မေးးAung lay89 : ​အ​ကို​ရေ​ကူ​ညီ​ပါ​အုံး​နော် Epson printer TX101 ​သုံး​ရ​တာ ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​လို့ ​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​မ​လဲ ​ဆို​တာ ​အ​ကြံ​ပေး​ပါ​အုံး​နော် ..
​ဖြေး​ကို​အောင်​လေး​ရေ ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​ဘူး​ဆို​တာ ​ဘယ်​လို​သုံး​လို့ ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​တာ​လဲ ​မ​သိ​ဘူး . ​ဖြစ်​နေ​တဲ့ ​ပြ​ဿ​နာ​လေး ​ပြော​ပြ​ပေး​ပါ .